XOG: ”Waxa ka socda Dhuusamareeb waa Afduub, ee wax dib u heshiisiin ah kama wado DF Somaliya” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: ”Waxa ka socda Dhuusamareeb waa Afduub, ee wax dib u heshiisiin...
Galgaduud (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay qalqal-gelin dhanka ammaanka ah ka wado Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud oo Ciidamo Boolis iyo kuwa Amisom la geeyay.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris (Ganey) oo ka mid ah Xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa sheegay dowladda inay Dhuusamareeb ka wado qal qalgelinta amniga iyo midda Siyaasadeed ee Magaaladaasi.
Waxa uu tilmaamay Wasaaradda Arrimaha gudaha inaysan wax dib u heshiisiin ah ka wadin Magaalada Dhuusamareeb.
“Waxa ka socda Dhuusamareeb waa afduub, Wasaaradda Arrimaha Gudaha wax dib u heshiisiin ah kama wado deegaanka, taas bedelkeed isku dir ayay ka wadaa, maalin hore magaalada waxaa halis u gasho in la isku fara saaro.” Ayuu yiri Xildhibaanka.
Waxa uu intaasi raaciyay Xildhibaanka ciidamo Boolis ah oo suggi waayay ammaanka Degmooyin ka tirsan Muqdisho in loo qaado Magaalada Dhuusamareeb.
Xildhibaan Ganey oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, “Ciidamo Boolis ah oo sugi waayay amniga Muqdisho, gaar ahaan Suuqa Bakaaraha, oo aan tagi karin Suuqa Xoolaha iyo 17ka degmo aan amnigooda sugi karin in maanta loo daabulo Dhuusamareeb oo ah meel nabad ah waa wax lala yaabo.‘‘
Waa Afduub waxa ka socda Galmudug
wax dib u heshiisiin ah kama wado Dhuusamareeb
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris (Ganey)